War cusub oo laga helayo dhaawacii soo gaaray Thomas Partey, miyuu Kooxdiisa Arsenal ka maqnaanayaa kulanka furitaanka horyaalka Premier League? – Gool FM
(London) 03 Agoosto 2021. War cusub ayaa laga helayaa dhaawacii soo gaaray ciyaaryahanka Kooxda Arsenal ee Thomas Partey, iyadoo si horudhac ah loo sii ogaaday muddada uu garoomada ka maqnaan karo.
Thomas Partey ayaa la soo warinayaa inuu seegi doono bilaabashada xilli ciyaareedka cusub ee Kooxdiisa Arsenal, kaddib markii uu dhaawac canqowga ka soo gaaray dhowaan.
Xiddigan reer Ghana ayaa dhaawac uu soo gaaray kulankii saaxiibtinnimo ee isudiyaarinta xilli ciyaareedka cusub oo ay Axaddii guuldarrada 2-1 kala kulmeen Chelsea, kaddib markii ay isku dheceen Ruben Loftus-Cheek.
Partey ayaa garoonka laga saaray daqiiqaddii 39-aad kaddib markii uu daweyn yar ku helay gudaha garoonka oo ay dhaqaatiirtu la tacaaleen dhaawaciisa dhanka canqowga ah, laakii shabakadda ESPN ayaa warinaya in ciyaaryahankan uu maqnaan doono dhowr todobaad.
Wararku waxa ay sheegayaan in Partey uu garoommada ka maqnaan doono lix todobaad, taasoo ka dhigan inuu seegi doono kulanka furitaanka horyaalka Premier League oo ay Arsenal la leedahay Brentford.
Arsenal ayaa kulankeeda saaxiibtinnimo ee ugu dambeeya la ciyaari doonta kooxda ay ku xafiiltamaan Waqooyiga Magaalada London ee Tottenham 8-da bishaan Agoosto, ka hor inta aysan kulankeeda furitaanka horyaalka Premier League fasal ciyaareedka cusub wajihin Brentford.
Kulanka furitaanka horyaalka Premier League ee xilli ciyaareedka cusub ayay Arsenal booqan doontaa garoonka Kooxda Brentford ee Brentford Community Stadium.
Kooxda PSG oo markaan indhaha ku haysa Kalidou Koulibaly... (Miyey ka garab ciyaarsiin doontaa Sergio Ramos?)